စက်နှင့်အတူဗီဒီယိုစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးပြီးထောင့်ကွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရာသီ Bouillon Cube ကိုအောင် high-အရည်အသွေးစက်ရုံ | Brightwin
စက်ရုံစက်နှင့်အတူဗီဒီယိုထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးပြီးထောင့်ကွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရာသီ Bouillon Cube အောင်
Bouillon တုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစာနယ်ဇင်းဖို့အသုံးပြုခြင်းနှင့် bouillon Cube, တက်ဘလက်, သကြား Cube, အစိမ်း bean ကိုကိတ်မုန့်နှင့်အခြားအစိုင်အခဲထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ကျနော်တို့ကိုနှိပ်စက်ပါဝင်သော Cube များအတွက်မြေတပြင်လုံးလိုင်းစေနိုငျသောတရုတ်အတွက်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ကြ၏, ထုပ်စက် , စက်နှင့်ပေါ်ကိုလက်ဝှေ့သတ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံနည်းပညာကော်ပီမကူးနိုင်သောကြောင့်, ကုမ္ပဏီအများအပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ကို copy ချင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကပျက်ကွက်; အဆိုပါ Cube ဒီ core ကိုနည်းပညာမရှိဘဲပိတ်ဆို့မည်ဖြစ်သည်။
သောနောက်-ရောင်းအားပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်အဆောက်အခြွင်းချက်အသံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး, ယခုကြှနျုပျတို့အဘို့သည်ကမ္ဘာ့အနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်လက်အကြားတစ်ဦးထိပ်တန်းရပ်တည်မှုရရှိခဲ့ပါပြီ စက်ထုပ်ပိုး Bouillon Cube ,စက်ထုပ်ပိုး Bouillon Cube စာနယ်ဇင်းပြီးတော့ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်စက်နှင့်အတူ Box ကို ,ထုပ်ပိုးပြီးလက်ဝှေ့စက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရာသီ Bouillon Cube , Wide ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အစာရှောင်ပေးပို့! ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်: ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, အကြီးဝန်ဆောင်မှု, Keep တိုးတက်မှုများ။ ကျနော်တို့ပိုပိုပြီး Oversea မိတ်ဆွေများကအနာဂတ်အတွက်အနီးနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက် join ကြောင်းမျှော်လင့်ကြသည်!
Bouillon တုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း။ ဒါဟာနှိပ်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကများနှင့်အလိုအလြောကျ cartoning ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစသည်တို့ကို bouillon တုံး, ချောကလက်, သကြား Cube နှင့် bean ကိုငါးပိကိတ်မုန့်နှင့်တူ Cube အတွက်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာစသည်တို့ကိုဖောက်သည် '' ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ, ရုပ်ရှင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရသိရသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နေသည် 1.
အဆိုပါဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းအဆိုအရ 2. ထုပ်စက်နှင့်လက်ဝှေ့စက်အရေအတွက်။
လာကြတယ် & သေဆုံး (Set) ၏အရေအတွက် 17/19/25
မက်စ်။ ဖိအား (KN) 100
မက်စ်အရှည် (မီလီမီတာ) 40
မက်စ်။ ဖြ၏အတိမ်အနက်ကို (မီလီမီတာ) 25
Cube အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) စိတ်ကြိုက်
လှည့်မြန်နှုန်း (r / မိနစ်) 20
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် (PC / ဍ) 600-1000
လျှပ်စစ်ပါဝါအရင်းအမြစ် (V ကို / Hz) 380/50
Power က (KW) 4
ပြင်ပမှာအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) * 1750 600 * 960
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 2300
1. ကမ်းလှမ်းချက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆင်ရေးကို manual
အာမခံကာလအတွင်း 4. အခမဲ့အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
5. ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း, ဝနှင့်လေ့ကျင့်
ယခင်: စက်ရုံထောက်ပံ့ရေးရာသီ Bouillon Cube စက်နှင့်အတူဗီဒီယိုထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးပြီးထောင့်ကွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: စက်နှင့်အတူ Hffs ထုပ်ပိုးပြီးစက်ထုတ်ပိုး OEM / လိမ္မော်ရောင်စက်ရုံကြက်သား Bouillon Cube
စက်ထုပ်ပိုး Bouillon Cube
စက်ထုပ်ပိုး Bouillon Cube စာနယ်ဇင်းပြီးတော့ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်စက်နှင့်အတူ Box ကို
ထုပ်ပိုးပြီးလက်ဝှေ့စက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရာသီ Bouillon Cube
capping ဖြည့် automatic လက်ရေဆေးထုတ်လုပ် ...
မွတ်စ်လင်ကြက်သား Seasoni များအတွက် Professional ကစက်ရုံ ...
စားသုံးနိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက် Castor S ကိုဟင်းချက် OEM အလိုအလျောက် ...
Bouillon cube pressing making machine bouillon ...
Big လျှော့ Bouillon ပြိုထုပ်ပိုး OEM ပေး ...
လက်အဘို့အစက်ဖြည့်ဆည်း linear အလိုအလျောက် wansh
rm 1003, အမှတ် 1399, Jinqiao လမ်း, ရှန်ဟိုင်းတရုတ်
ခေါ်ရန်ကြှနျုပျတို့ကိုအခုဆိုရင် (WhatsApp ကို):
Bouillon Cube ကိုထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်စက်, Bouillon Cube စက် Making , Bouillon Cube စက် ,沪ICP备18018895号-1